Dalka Kenya Oo Gebi Ahaanba Saaka Anay Ka Soo Duulin Diyaaradihii Soomaaliya Qaadka Usoo Qaadi jiray Iyo Talaabada Ay Qaadayaan Ganacsatada Qaadku
Dalka Kenya Oo Gebi Ahaanba Saaka Anay Ka Soo Duulin Diyaaradihii Soomaaliya Qaadka Usoo Qaadi jiray Iyo Talaabada Ay Qaadayaan Ganacsatada Qaadku 0 Tuesday 6th September 2016 11:40:52 in Wararkii Maanta by Xarunta Dhexe Visits: 790
Dalka Kenya Oo Gebi Ahaanba Saaka Anay Ka Soo Duulin Diyaaradihii Soomaaliya Qaadka Usoo Qaadi jiray Iyo Talaabada Ay Qaadayaan Ganacsatada Qaadku Dalka Kenya gebi ahaanba kama aysan duulin diyaaradihii Soomaaliya geyn jiray qaadka kaddib markii dowladda Soomaaliya ay si ku meel gaadh ah ku hakisay qaadkii dalka la gayn jiray.
Ganacsatada qaadka oo ka hadlay arimaha jaajinta qaadka ayaa xaqiijiyay in garoomada Jomo Kenyatta iyo Wilsan uusan saaka ka dhoofin qaad.
Waxa ay intaasi kud dareen in tallaabadani ay qaaday dowladda ay dhaawaceyso ganacsigooda maadaama lacago badan ay uga maqan tahay ganacsatada qaadka ee gudaha Soomaaliya. yagoo sheegay in ay dib ka soo shiigi doonan dalabada la gudboon ee ay qaadi doonaan Dowladda ayaa talaabadaan u cuskatay arrimo amni, inkastoo aysan shaacin sababaha dhab ahaantii ku kalifay in ay qaaddo talaabadan.
Soomaaliya ayaa waxaa maalintii ka dega dhowr diyaaradood oo sida qaadka laga keeno dalka Kenya, iyadoo Soomaalidu la sheego in ay yihiin dadka ugu badan ee cuna qaadka Kenya.
Kenya ayaa qaadka ay Soomaaliya u dhoofisa waxa ay ka heshaa dakhli aad u badan, iyadoo qoysaska beeraleyda Meru ay si weyn ugu tiirsan yihiin ganacsiga qaadka.v Print